Multi-couplet isina Stainless simbi Fermenter - China Multi-couplet isina Stainless simbi Fermenter Supplement, Factory -KNIK BIO
Multi-couplet isina Stainless simbi Fermenter
Iine anopfuura imwechete Fermenter (iwo akaenzana vhoriyamu kana akasiyana mavhoriyamu aripo) akaumbwa nehurongwa hwakaunganidzwa, angave akakodzera pakufanana parthlel orthogonal kuedza kunopa yakanyanyisa nzira yekugadzirisa kutsvaga nekupfupisa kudzidza kwenguva yakakosha. Chinhu chakakosha ndechekuti iyi mudziyo wekugadzika paramita kudzokorora zviri nani.
Dhayamita kukwirira reshiyo: 1: 2.5; mvura yekuzadza chinhu: 70%
Tangi: dhizaini dhizaini 0.35Mpa jasi: dhizaini dhiza 0.3Mpa, yakagadziriswa yakatsaukirwa yakarongedzwa kuti ivandudze kufanana kweiyo shanduko yekushandura uye tangi tembiricha.
Mota: yekuvirisa tangi yakatsaurirwa mota, ita shuwa kuti mota inogona kushanda munzvimbo dzakaomarara;
BLBIO-C yekudzora system: Nokia S7-200 yakatevedzana PLC control system + 10 "LCD yekubata chidzitiro kuratidzira kushanda, pane-saiti yakananga kushanda (menyu inotungamirwa), iyo yose Chinese menyu uye interface; sampling uye kuongororwa kuratidza bratch tank data, system data kuverenga kurongedza inodzora inomhanyisa inomhanya, tembiricha, yepakati tangi, Ph kukosha, KUTI kukosha;
Kudzora system uye iyo Fermenter vhoriyamu inogona kuve chero musanganiswa, nyore uye nyore
D - -Amuridzi wekuenzanisira weyunivhesiti yekudzora makomputa + Kudzora Module - kusashanda B controller, yekambani yangu yepasi-standard controlers -C 10 inches LCD yekubata screen + PLC -D 15-inch LCD yekubata screen + Motorola PLC + inopinza Transmitters.